Ranomasimbe Pasifika - Wikipedia
Ny ranomasimbe Pasifika miloko manga
Ny Ranomasimbe Pasifika, na Ôseana Pasifika, mivelatra amina velarana 166 241 700 km², dia ranomasimbe mivelatra indrindra eto an-tany. Mamaritra an'i Ôseania izy ary nosy sy tamba-nosy sasantsasany an'i Azia (Japàna, Filipina, Insolindia). Voarafaritr'i Azia, i Aostralia, i Amerika sy ny Ranomasimbe Atsimo izy. Ny fariny amin'ny Ranomasimbe Atsimo dia eo amin'ny laharam-pehintany faha 60. Ny Ranomasimbe Pasifika atsinanana sy andrefana dia voasaraka ny laharan-jarahasina faha 180.
Ny ranomasimbe pasifika sy ny fehn'afo (mena)
Ao amin'ny Ranomasimbe Pasifika no mahita ny tevana lalina indrindra eto an-tany, ny halalin'izy ireo dia mety mahatratra 10 kilometatra mahery ohatra ny tevan'i Korily, i Marianina, ary i Filipina. Betsaka ihany koa ny harandriaka ohatra ny Nosy Krismasy, ny atoll mivelatra indrindra ary antitra indrindra eto an-tany.
I Pasifika dia be toerana ivoahan'ny vatomiempo mafana avy any anivon-tany (hotspot). Ny hotspot dia mampisy ny tamba-nosy toy ny nisy Hawaii-Empereur ary ny tendrombohitra ambanin-dranomasina Louisville.
Ny sisin'ny Ranomasimbe Pasifika dia ny fehin'afo (ceinture de feu) afatsy ny atsimo mankany amin'i Antarktika. Avy amin'io fehin'afo io ny horohorontany mampisy ny tsonamy. Tamin'ny 1900 ka hatramin'ny 2004, tsonamy 796 no hita, ary 17% tamin'izy ireo no nisy tany Japàna. Ny ivontoerana iraisam-pirenena fanairana, ny Pacific Tsunami Warning Center, dia asaina mitazana sy manaitra ny mponina na ny governemanta raha mety hitera-doza ny tsonamy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ranomasimbe_Pasifika&oldid=995171"
Voaova farany tamin'ny 28 Jolay 2020 amin'ny 10:15 ity pejy ity.